Inotevera yekuvandudza yePokémon GO neitsva Pokémon Goridhe uye Sirivheri | IPhone nhau
Pokémon GO inowedzera: nyowani pokémon uye maficha mukuona
Ngirozi Gonzalez | | IPhone mitambo
Vhiki rapfuura takakuudza nezvazvo chiitiko chakakosha ye Pokémon Enda kunopemberera Zuva reValentine rinopera nhasi na20.00: XNUMX dzemasikati. Hatigone kuramba kuti Niantic, anovandudza mutambo, anofanirwa kungwarira paanounza maficha matsva ekuchengetedza vashandisi vanoshanda vanofara avo zuva nezuva vanofamba mamaira nemakiromita kuti vawane pokémon nyowani.
Maawa mashoma apfuura, Niantic yakazivisa matsva maficha, mashandiro uye pokémon mune iri kuuya Pokémon GO kugadzirisa. Ichi chiziviso chakakonzera kushingaira pakati pevateveri vakavimbika vemutambo, avo vaishuvira kuwana zvisikwa zvitsva kuti vawedzere Pokédex yavo.
Iyo Pokémon GO kuwedzera: nyowani pokémon
Zviziviso zvakakosha zvePokémon GO zvinoitwa kuburikidza neiyo webhusaiti yeNiantic Labs webhusaiti. Iyi webhusaiti inounganidza ruzivo rwese nezve mutambo uye zvese zvadzo kugadzirisa mumitauro yakasiyana Pane ino chiitiko, iye anovandudza akaburitsa chirevo achizivisa izvo "Pokémon GO inowedzera":
Chikorita, Cyndaquil, Totodile, uye mamwe akawanda Pokémon ave pano! Kutanga vhiki ino, iwe uchave nemukana wekubata anopfuura makumi masere Pokémon akawanikwa pakutanga mudunhu reJohto mumitambo yevhidhiyo ye Pokémon Goridhe y Pokémon Sirivheri. Isu tatoisawo zvimwe zvinhu zvitsva kusimudzira yako Pokémon GO ruzivo.
Muchidimbu, Pokémon GO vatambi vanozogona kubata anopfuura makumi masere Pokémon eGoridhe uye Sirivheri chizvarwa. Chichiri chishandiso kuyedza tangazve mukurumbira wemutambo muzhizha.
Kune rimwe divi, iwo matsva maficha anowanikwa mune yekuvandudza ndeaya anotevera:
Zvitsva zvitsva: sezvavanotaura pane webhusaiti yepamutemo, "Kune mimwe mikana yekuchinja Pokémon yedu". Uye zvakare, mu poképaradas isu tichawana zvinhu zvitsva zvekushandura imwe pokémon, basa idzva remutambo.
Mutambo wemutambo: Kana isu tawana yemusango pokémon, isu tichaona kuti ivo vawana nyowani nyowani. Kune rimwe divi, kurongeka kwescreen kwakagadziriswa, zvichiita kuti ma berries uye poké mabhora zviwanikwe.
Mitsva michero: Mune poképaradas isu tinowana maviri matsva emabriji kufudza iyo pokémons kuvabata. latano michero, izvo zvinodzora kufamba kwechisikwa; chinanazi michero, zvinozoita kuti zviwitsi zviwanikwe zvakapetwa kana iyo pokémon ikabatwa zvine mutsindo pane inotevera cast
Wadhi itsva: kugadzirisa iyo avatar zvino kuzove kuri nyore uye kunosanganisira zvipfeko zvitsva: machipisi, t-shirts, bhurugwa ...
Zvinotaridza kuti Niantic yakaisa mabhatiri uye inotanga kushanda nenzira hombe. Tichaona kuti iyo ficha inopera sei kana ichioneka muzvitoro zveapp. Zvese munguva yakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon GO inowedzera: nyowani pokémon uye maficha mukuona
AppGratis, application yezuva nezuva yekusimudzira, inomira kushanda.
Apple inopokana nemutemo weNebraska wakatemerwa "Kodzero yekugadzirisa" mutemo